IOS र macOS लाई एकीकृत गर्ने हो? विचार एप्पल को योजनाहरु को लागी फर्काउँछ ग्याजेट समाचार
वास्तवमा, यो मुद्दा कपर्टिनोमा कहिल्यै प्राथमिकता हुन सकेको छैन।कम से कम त्यो त एप्पल प्रतिनिधिहरूले यो प्राचीन कालदेखि नै चिनिन्छन्, तर निस्सन्देह, राम्रो पुरानो स्टीव जॉब्स हाँसे र डिजिटल पेन्सिलको बारेमा धेरै र अब तिनीहरूले तपाइँलाई स्क्रिन-प्रिन्ट गरिएको एप्पलको साथ लगभग € १०० मा प्रस्ताव गर्दछन्।
जहाँसम्म, एप्पलको जहिले पनि ग्यालरीको लागि इकोसिस्टममा यसको मजबूत बिन्दु रहेको छ, हामीहरू जोसँग पूर्ण एप्पल सूट छ यसलाई राम्रोसँग थाहा छ। अब जब स्पष्ट रूपमा कपर्तिनोबाट उनीहरूले काम गरिरहेको हुन्छ कम्तिमा आईओएस र म्याकोस बीच अनुप्रयोगहरू काम गर्ने तरीका एकीकृत गर्न।.
यो नवीनतम ब्लूमबर्ग रिपोर्टमा छ कि एप्पल कसरी यसको सबै प्रणालीहरु मा अनुप्रयोगहरु एकीकृत गर्न को लागी काम गरीरहेको छ गोपनीय जानकारी को उपयोग गर्न को लागी सक्षम छ। अधिक विशेष रूपमा, यो अन्तिम WWDC17 देखि जाली भइरहेको छ र यसको आफ्नै कोडको नाम पनि छ: z Marzipan »। भविष्यमा यो कसरी मानिन्छ कि एप्लिकेसनको कोड लेख्दा आईफोन र म्याक दुबैमा सही र समान तरिकाले काम गर्न सक्छ। र आईप्याडमा ... तपाईंलाई यो मनपर्दैन? निस्सन्देह, यससँग धेरै शक्तिहरू छन्, तर हामीलाई कुनै शंका छैन कि यो लडाईमा निरन्तरताका लागि ठूलो हार्ने म्याकोस हुनेछ।
यसको मतलब हाम्रो मतलब यो छ कि आईफोन र आईप्याड म्याक भन्दा धेरै बेचिन्छ, त्यसैले विकासकर्ताहरू धेरै प्रस्ट हुनेछ, हामी आईओएसमा राम्रोसँग काम गर्छौं, हामी म्याकोसको बारेमा हेर्नेछौं। र मकोसले हामीलाई प्रस्तुत गर्न सक्षम छ कि प्रदर्शन यो बर्बाद हुन सक्छ।
जाहिर छ हामी पहिलो झलकहरू देख्न सक्नेछौं W मर्जीपान »प्रोजेक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी १ during मा के हुने थियो, र एक पीडितको साथ शुरू गर्नको लागि शुल्क लिइनेछ, म्याकोस अनुप्रयोग स्टोर यसको प्लेटफर्महरूको लागि एकीकृत स्टोरको जन्म दिन गायब हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » IOS र macOS लाई एकीकृत गर्ने हो? विचार एप्पल को योजनाहरु को लागी फर्काउँछ
अमेजन संगीत असीमितले हामीलाई पारिवारिक दरको दुई निःशुल्क महिना प्रदान गर्दछ